Mpampihanaka COVID-19 malaky sy ny “andavanandro vaovao” indoneziana · Global Voices teny Malagasy
Fitondrana nasandratry ny fahalalahana ara-pivavahana nentin-drazana sy ny fepetra anti-aretimandringana
Voadika ny 12 Jona 2020 6:59 GMT
Mponina ao Banda Aceh manatrika lanonana ara-pivavahana. Saripikan'ny mpisera Flickr Johanes Randy Prakoso. (CC BY-NC-ND 2.0)
Heverina fa nanana anjara lehibe tamin'ny fielezan'ny valan'aretina COVID-19 tao Indonezia ireo fivoriana ara-pivavahana maro dia maro. Tsikaritra iray niteraka aretina an-doha tamin'ny fitondran'ny Filoha Joko Widodo, izay niresaka ‘andavanandro vaovao’ (New Normal), hamerenana amin'ny laoniny ny fiainam-pirenena ary tsy mazoto hanao izay hampahatezitra ireo vondrona ara-pivavahana mpandala ny mahazatra azy, vondrona itoeran'ny fanohanana ara-politika manandanja.
Tamin'ny 3 Jona, nitatitra ny sampam-pampahalalam-baovaom-panjakana fa nihaona tamin'ny mpitondra fivavahana ny Filoha Joko Widodo hiresaka amin'ny fahazoana manokatra indray ireo toeram-pivavahana izay nikatona noho ny fisian'ny areti-mandringana. Efa nisokatra indray ireo masikiriny (moskea) sy fiangonana nanomboka teo na dia tsy mbola amin'ny endriny feno aza.
Niteraka ahiahy tamin'ny maro ny fampiheverana fisokafana feno noho ny tahotra fandrao hihanaka fanindroany indray ny viriosy.
Heverina ho maika loatra ny fanokafana ny trano fivavahana ao anatin'ny areti-mandringana, araka izay voamarika ao amin'ny taratasin'ny Minisitry ny Raharaham-Pivavahana. Mety hiteraka fielezana vaovao indray izany hetsika izany satria sarotra ny hahatsikaritra mpanatrika tsy mampiseho soritr'aretina.
Tsy nampihatra (ilay fantatsika ho) fepetran'ny andavanandro vaovao i Korea (atsimo) — naverin-dry zareo amin'ny toerany ny fepetram-pamerana! hita ho tsy mbola mihevitra ny amin'izany i Indonezia. Lasa laharam-pahamehana ambonin'ny toekarena ny fanokafana indray ny toeram-pivavahana. Hisy indray ve ny fiheverana ny fanokafana ireo toeram-pivavahana?
Tamin'ny voalohany ny manampahefana nihenahena tamin'ny fampiharana ny fepetra hanakonana ireo hetsika ara-pivavahana manoloana ny COVID-19.
Tamin'ny Febroary, ny filoha lefitra Indoneziana sady mpitondra fivavahana mpandala ny nentin-drazana manana ny lazany, Ma'aruf Amin nanonona qunut, karazam-bavaka tononina ho fanoherana ny fandrahonana sy ny vintan-dratsy, izay noheverina ho kitro ifaharana hifehezana ny viriosy.
Ny fisian'i Amin tao amin'ny lisitry ny prezidà no nanampy an'i Widodo ho voaantoka ny ifidianana azy indray tamin'ny fifidianana nifaninanana aoka izany tamin'ny herintaona.
Saingy rehefa niakatra ny tranga [mg] COVID-19 tamin'ny marsa sy avrily, dia lasa lohahevitra lehibe ifanatreham-bahoaka ny lazaina ho “mpampiely haingana dia haingana ny viriosy (virus ‘super-spreaders’).
Azo ampiharina ho ‘mpampiely haingana’ ireo karazam-pamoriam-bahoaka rehetra mamindra aretina. Fa amin'ny ankapobeny dia ara-pivavahana ireny lanonana ireny ao Indonezia.
Tamin'ny volana marsa, ohatra, efa saika hotontosaina ao amin'ny faritanin'i Sulawesi indoneziana ny Tabligh Akbar*.
Tsy nanemotra ny lanonana ny governemanta provinsialy ary saika tsy nahemotra raha tsy namoaka fitarihan-dalana ny governemanta foibe ao Jakarta milaza fa nakatona ny famoriam-bahoaka. Fa tamin'izany fotoana Indoneziana mpivavaka hatramin'ny 8000 sy vahiny anjatony maro no miara-mivavaka.
Io lanonana tokana io fotsiny dia efa ahiana ho fielezan'ny viriosy tany amin'ny faritany 22, araka ny nolazain'ny manampahefana ara-pahasalamana Indoneziana.
Talohan'izany tamin'io volana io ihany, mampivondrona olona ny laretirety kristiana tontosasina isaky ny fanombohan'ny marsa ao Bandung, Java Andrefana. Nanoritsoritra taty aoriana ny governora tao an-toerana, Ridwan Kamil, fa iray tamin'ireo toerana efatra nihanahan'ny aretina tao amin'ny faritany ny lanonana izay notanterahana tao amin'ny fandraisam-bahiny iray tao Badung. Nampidirina hopitaly ny valo tamin'ireo niverina avy any rehefa hita fa miabo ny fitiliana COVID-19 natao taminy, efatra tamin'ireo no maty.
Ny fitsongoana taloha indrindra nanaovan'ny manampahefana fitiliana dia tamin'ny lanonana iray manodidina an'i Malayzia tamin'ny 27 Febroary – 1 Marsa.
Nizoran'olona 10.000 avy amin'ny firenen-tsamihafa, ary nahitana Indoneziana miisa 700, ny Tabligh Akbar maharitra efatra andro tao amin'ny Masikiriny Sri Petaling tao Kuala Lumpur.
Hatramin'io lanonana io, izay niteraka ny iray amin'ny fielezan'ny COVID-19 be indrindra tao Malayzia, niezaka mafy i Jakarta hitsongo dia ireo mpandray anjara, noho ny tsy firaharahian'ny niverina avy any hanoka-monina ny tenany sy hanao fitiliana
Efa natombok'i Indonezia amin'izao fotoana izao, amin'ny alalan'ny masoivohony sy amin'ny alalan'ireo lehiben'ny any am-pielezana, ny havitrika amin'ny fanaraha-maso ireo lanonana sy famorian'olona ara-pivavahana atrehin'ny Indoneziana monina ampitan-dranomasina.
Eo amin'ny masikiriny, fiangonana ary ny fanjakana
Rehefa tratran'ny tsindry mihamahery ireo lohandoham-pivavahana dia namoaka tolokevitra tamin'ireo mpiara-mivavaka amin-dry zareo mba handray pepetram-pahasalamana sy fiarovana amin'ny alalan'ny fanatontosana fombafombam-pivavahana ampitain-davitra.
Amin'izao fotoana izao ny governemanta namoaka torolalana rehefa mamoha indray ny toeram-pivavahana ho ao anatin'ny fanentanana andavanandro vaovao izay nokendrena hanaovana ainga vaovao ny toekarena.
Samy nanana ny fandraisany ireo torolalana avy eo ny tsirairay, tahaka izany koa ny mpitondra fivavahana izay naneho ny ahiahiny momba ny fiantraikan'ny fanokafana indray ny toeram-pivavahana eo amin'ny fahasalamana.
Raha iray amin'izay miteraka tebiteby amin'ny vahoaka ny mety hisian'ny fielezan'ny viriosy haingana dia haingana amin'ny fotoam-pivavahana arahin'ny maro, dia mampanahy dia mampanahy tahaka izany ihany koa ny fiantraikan'ny mudik — fomban-drazana fanao isa-taona izay hamangian'ny mponina an-tanandehibe ny havany any ambanivohitra hankalazan-dry zareo ny Eid –.
Namoaka didy haram (fandraràna) ny Filan-Kevi-Pitantanan'ny Ullemas Indoneziana (MUI) hanakanana ny mudik amin'ity taona ity hampitsaharana ny fielezan'ny viriosy.
Vahoaka maro, anefa, no miezaka manararaotra ireo lesoka isan-karazany ao amin'ny rafitra amin'ny fividianana sertifikà ara-pahasalamana hosoka any amin'ireo sehatra e-varotra maro izay manambara fa tsy misy COVID-19 ry zareo ka afaka mandeha dia lavitra. Ahiana ny iakaran'ny tranga coronavirus ho any amin'ny tampony (izay efa mihoatra ny 32.000 amin'izao fotoana izao ary 1.883 no maty).
Nitondra fahadisoam-panantenana ho an'ny Indoneziana mihoatra ny 200.000 ihany koa ity volana ity raha nanantena ny hanao fivahiniana masina Hajj ry zareo amin'ny faran'ny volana jolay.
Efa nandà tamin'ny fomba tsy azo ivalozana ny governemanta na hanatontosa ny fotoana i Arabia Saodita na tsia.
Amin'ny fahafatarana fa matetika no miandry an-taonany maro mihitsy ireo te-hanao fivahiniana masina Hajj mba ho tafiditra ao anaty lisitra ao amin'ity firenena ahitana Miozolomana betsaka indrindra eto ambonin'ny tany ity, dia nilaza ny fanapahan-kevitra ho “sady mangidy no sarotra dia sarotra” ny minisitry ny raharaham-pivavahana ao Indonezia, Fachrul Razi.
*Ny Tabligh Akbar dia karazana famoriam-bahoaka avy amin'ny finoana miozolomana mampiaraka ny fanononana Koranika, toriteny sy proselytisma.